Kitra: ny sekretera jeneraly no hitantana ny FMF | NewsMada
Kitra: ny sekretera jeneraly no hitantana ny FMF
Nanakoako maneran-tany, ny fanapahan-kevitra tampoka avy amin’ny federasiona iraisam-pirenen’ny baolina kitra (FMF), nampitsahatra ny komity mpitantana ny baolina kitra malagasy, amin’ny asany. Manaiky izany, ny filoha Andriamiasasoa Doda.
Mbola ambentin-dresaky ny mpanara-baovao, indrindra fa ireo mpitia baolina kitra, ny nampiatoan’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa), amin’ny asany ny komity mpitantana eo anivon’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Tsy niandry ela fa avy hatrany dia namaly izany, ny filoha Andriamiasasoa Doda ka nanambara fa manaiky io fanapahan-kevitra io ny tenany sy ireo mpiara-miasa aminy rehetra. “Manomboka izao, ny sekretera jeneraly no hisahana ny fampandehanan-draharaha anatiny rehetra, mandrapitsanganan’ilay “comité de normalisation”, hapetraky ny Fifa sy ny Caf.
Nomarihiny fa nahita vokatra ary nizotra nankany amin’ny fahombiazana ny federasiona, na nisedra olana aza noho ny fahatapahan’ny fanampiana teo amin’ny fampivoarana ny baolina kitra, tao anatin’izay herintaona sy tapany, nitantanany ny federasiona malagasy, izay. Porofon’izany, ny nahatafita ny Barea, amin’ny Can 2019 sy ny hiatrehan’ny Malagasy ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, amin’ny beach soccer.
Misy ny baolina amin’ny alahady
“Mandeha ny baolina amin’ny alahady, ary efa ao anatin’ny fikarakarana ny ho fampivondronana ireo mpilalao ny federasiona, amin’izao fotoana izao”.
Marihina fa io “comité de normalisation” io, no hisahana ihany koa ny fifidianana izay ho filoha hitantana ny FMF. Haharitra hatramin’ny 12 mey izany. Tsy mbola nanambara kosa Andriamiasasoa Doda, na mbola ho mpifaninana na tsia, amin’izany hazakazaka ho filohan’ny FMF, izany. Tsy hadinony ihany koa ny nitondra fisaorana ho an’ireo ligim-paritra rehetra sy ny mpanohana sy ny mpilalao, ary ireo mpiara-miasa rehetra, tao anatin’izany fotoana izany.
Nankasitraka ity fanapahan-kevitra navoakan’ny Fifa ity ihany koa Rakotomamonjy Neypatreiky, nilaza fa nanjakan’ny tsy rariny sy ny kolikoly ary ny fampitahorana ny zava-nisy tany Sava, ka nahatonga azy niala an-daharana. “Aloha loatra raha hilaza aho hoe hilatsaka indray na tsia fa aleo ho hita eo izay ho olona mandrafitra ny “comité de normalisation”, hoy izy.